Blog • Brand You Academy - Best Branding Courses in Myanmar
Brand You Academy ကနေ အပါတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ ည (၇ : ၀၀)မှာ ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Community MeetUp မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို အားလုံးအတွက် Notes အနေနဲ့ ပြန်ပြီး တင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ခြင်းစီ အသစ်လေးတွေကို ဒီ
ကိုယ်ဝါသနာပါတာတစ်ခုတည်းနဲ့ ဘာမှ မသိ၊ နားမလည်၊ မတတ်တဲ့ နယ်ပယ်မှာ အလုပ်လုပ်တာ ၈ နှစ်လောက် ကြာတဲ့အခါ ကျွန်မ သေသေချာချာသိလာရတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲက တစ်ခုက ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ကိုယ့်ကို စိတ်ရင်းနဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမဲ့၊ ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကို judge မလုပ်ဘဲ လက်ခံပေးမဲ့၊
ဒီလတွေမှာ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တရားတွေ အတော်လေး နာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကြုံရသမျှ စိတ်ဖိစီးစရာတွေကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ် ပြောရမယ်။ အခုလည်း ဆရာတော်ကြီး ဟောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို မျှဝေချင်တာပါ။ ဂုဏ်ဖော်တာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ပြောရရင် ကျွန်တော်က လောဘနည်းတယ်။ လိုအင်ဆန္ဒလည်း နည်းတယ်။
ဟိုနေ့က အောက်စဖို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တရားတစ်ပုဒ်မှာ နာလိုက်ရပါတယ်။ Dr. Matthieu Ricard က Happiness ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားပါတယ် တဲ့။ လူတွေပျော်ရွှင်တတ်ခြင်း၊ မပျော်ရွှင်တတ်ခြင်းရဲ့ ၂၀-၂၅% က မွေးကတည်းက DNA ထဲ၊ Genes ထဲမှာပါလာပါတယ်တဲ့။ ဥပမာ – ခဏခဏ
အရှေ့က တင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်နဲ့ တွဲဖတ်ရင်တော့ ပိုနားလည်မယ်။ အဲဒီပို့စ်မှာ အခု ခေတ်စားနေတဲ့ Minimalism ဆိုတဲ့ ဘဝနေနည်းက ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ် ဆိုတာကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။ အခု ပို့စ်မှာ ဆက်ရေးမှာက ဟုတ်ပြီ၊ နေ့တိုင်းတော့ ဥပုသ်မစောင့်နိုင်ကြဘူး။ သို့သော် တစ်ရက်လေး စောင့်ပြီး
ဒီဘက်နောက်ပိုင်း လူတော်တော်များများ သဘောကျလာကြတဲ့ လူနေမှုပုံစံတစ်ခုက Minimalism လို့ ခေါ်တဲ့ ရိုးရှင်းစွာ နေထိုင်ဖြတ်သန်းခြင်းပေါ့။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကျင်လည်နေရတဲ့ ခေတ်ကြီးက ရုပ်ဝတ္ထုတွေ သိပ်ပြီး တိုးတက်လာတာကိုး။ စားစရာတွေ၊ ဝတ်စရာတွေ၊ ဖုန်းတွေ၊ ကားတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေ အများကြီးကိုမှ အများကြီး ဖြစ်လာတယ်။ ရုတ်တရက်ဆို
လူတစ်ယောက်၊ မိသားစုတစ်စု Minimalist ဖြစ်မဖြစ်ကို သူတို့အိမ် တစ်ခါလောက် သွားလည်ဖူးရုံနဲ့တင် သိနိုင်တယ်။ ပစ္စည်းတိုလီမိုလီလေးတွေကအစ ဘယ်လောက်ထိ သိမ်းထားတတ်သလဲပေါ့။ ဗူးတွေ၊ ခွက်တွေ၊ ခြင်းတွေ စသဖြင့် ရှိရှိသမျှ အကုန် သိမ်းထားတဲ့ အိမ်တွေလည်း ရှိတယ်။ လွှင့်ပစ်သင့်တာလည်း မပစ်၊ သူများလည်း မပေး၊ ကိုယ်လည်း
Minimalism ဆိုတာ Living with less လို့ နားလည်နိုင်တယ်။ သဘောကတော့ ဘုရားလောင်း ဝေသန္တရာမင်းလို ပါရမီဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ ရှိသမျှ အကုန်လှူတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ တောထဲသွားပြီး တဲတစ်လုံးနဲ့ နေဖို့ထိလည်း မဟုတ်ဘူး။ တတ်နိုင်သလောက် ပစ္စည်းနည်းနည်းနဲ့ နေတာကို ခေါ်တာ။ Living with none
တစ်နေ့က ညီမလေးတစ်ယောက်ကို coaching လုပ်ရင်း ပြောဖြစ်ခဲ့တာလေးပါ။ ကျွန်မကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားမှာ ငယ်ကတည်းက တူတူနေလာတဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း သေသွားလို မစားနိုင်မအိပ်နိုင် ဘာအလုပ်မှမလုပ်နိုင်ဘဲ depression ဝင်၊ ဆေးတွေသုံးနေတဲ့သားကို အဖေက လမ်းလျှောက်ခေါ်သွားပြီး ပြောပါတယ်။ “Life goes on, either you move
Learning to Forgive….
ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခွင့်လွှတ်ဖို့က အခက်ဆုံးပါ။ များသောအားဖြင့် ငါ ကံဆိုးရတာ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဘယ်ဝါ့ကြောင့် အပြစ်တင်တတ်ကြပေမဲ့ အတွင်းစိတ်ထဲမှာ What’s wrong with me? ငါ ဘာများအမှားလုပ်ခဲ့မိလဲ၊ ဘယ်နေရာ မှားနေလိုလဲ၊ ငါပြောတာ မှားသွားပြီလား.. သိုမဟုတ် မပြောခဲ့မိတာများ မှားသွားလား..ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့